Kolombiya Shiinaha ayaa ka furtay Cisbitaalka Sadexaad ee Cusub uguna weyn Jiaxing
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kolombiya Shiinaha ayaa ka furtay Cisbitaalka Sadexaad ee Cusub uguna weyn Jiaxing
Columbia China, oo ah iskaashi ka dhexeeya Maamulka Columbia Pacific Pacific, Kooxda Sheares Healthcare Group, oo ah 100% iska leh shirkadda maalgashiga Singapore Temasek, iyo Hong Kong fadhigeedu yahay Swire Pacific Limited, ayaa furtay isbitaalkeedii saddexaad & kan ugu weyn 500-sariirood oo takhasus badan leh Jiaxing, Gobolka Zhejiang.
Isbitaalka Jiaxing Kaiyi waxaa ruqsad u haysta 500 sariirood oo leh aag dhisme oo dhan 112,000 mitir murabac. Waxaa loo dhisay si waafaqsan halbeegyada Guddiga Wadajirka ah ee Caalamiga ah (JCI) waxaana looga golleeyahay in lagu bixiyo daryeel xarun dhexe oo bukaan iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad caafimaad oo casri ah. Waxay leedahay 10 tiyaatarro qalliin oo ay ku jiraan 2 OT -yada dhijitaalka ah, 2 DSAs, 6 LDRP (Shaqada, Bixinta, Soo -kabashada iyo Dhalashada), iyo qalabka ogaanshaha sare sida MRI 3.0. Wadarta kharashka ku baxaya maalgashigu waa US $ 220 milyan oo cusbitaalku wuxuu qaatay 3 sano in la dhiso oo la hawlgeliyo.
Adeegyada laga bixiyo Isbitaalka Jiaxing Kaiyi waxaa ka mid ah la -talinta bukaan -socodka, adeegyada bukaan -jiifka, shilka & baaritaanka degdegga ah iyo caafimaadka. Takhasusyadeeda waxaa ka mid ah dawada gudaha, kansarka, qalliinka guud, lafaha, neefsashada, urology, endocrinology, gastroenterology, neerfaha, nephrology, wadnaha, maqaarka, maqaarka, qorsheynta qoyska, dhiig -bax, cudurrada carruurta, baxnaaninta iyo dawada dhaqanka Shiinaha. Waxaa lagu qalabeeyay qalab baaritaan caafimaad oo horumarsan sida GE's MRI 3.0, GE's CT 64, shucaaca dhijitaalka ah, ultrasound, iyo shaybaar caafimaad oo adeeg buuxa ah. Bukaan -socodka waxay awoodi doonaan inay isbitaalka ku isticmaalaan caymiskooda caafimaad ee dadweynaha iyo kan ganacsiga.
“Markii la furayay isbitaalkeeda saddexaad iyo kan ugu weyn, Columbia China waxay higsaneysaa inay gaarsiiso heerka ugu sarreeya ee tayada daryeelka caafimaadka, adeegga iyo waayo -aragnimada bukaanka dadka 5.5m ee Jiaxing,” ayuu yiri Bee Lan Tan, Madaxweynaha & Maamulaha Kooxda Columbia China. “Furitaanka isbitaalka si guul leh intii lagu jiray muddadii aafadu ma suurtoobi lahayd haddii aysan jirin ballanqaad iyo hufnaan xukuumadda Jiaxing iyo taageerada saraakiisha dowladda ee Aagga Horumarinta Dhaqaalaha iyo Farsamada Jiaxing. Columbia China waxay weli u heellan tahay inay u keento Jiaxing karti caafimaad iyo maareyn caalami ah oo dheeri ah, si baahiyaha dadka maxalliga ah si wanaagsan loogu adeego. ”
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah mashaariicda muhiimka ah ee Jiaxing ee “100 Sannadood 100 Mashruuc”, furitaanka rasmiga ah ee Isbitaalka Kaiyi wuxuu gacan ka geysan doonaa hagaajinta muuqaalka adeegyada daryeelka caafimaadka Jiaxing wuxuuna u suurtagelin doonaa dadka Jiaxing iyo nawaaxigeeda ku xeeran inay la kulmaan adeegyo daryeel caafimaad oo qiimo leh oo heer caalami ah inaad ka tagto Jiaxing.
Xafladdii daahfurka, Isbitaalka Jiaxing Kaiyi iyo Kulliyadda Zhejiang Tongji ayaa kala saxiixday Heshiis Isfahan si ay uga wada shaqeeyaan tababarka shaqaalaha, cilmi baarista sayniska iyo hal -abuurka, iyo in la dhiso goob lagu mideeyo waxbarashada, ku dhaqanka iyo cilmi baarista.
Isbitaalka Jiaxing Kaiyi iyo Ururka Ganacsatada Maalgashiga ee Jiaxing Taiwan ayaa sidoo kale saxiixay qandaraas si loogu abuuro jawi caafimaad oo la heli karo, aan xuduud lahayn, oo raaxo u leh dadka reer Taiwan ee ku nool kana shaqeeya Jiaxing.
Iyada oo qayb ka ah mas'uuliyadda bulsheed ee Isbitaalka Jiaxing Kaiyi, waxay sidoo kale 100,000 RMB ugu deeqday Foundation Zhejiang ee Dadka Naafada ah si ay u taageerto barnaamijka caymiska caafimaad ee ugu weyn ee dadka naafada ah. Tani waxay gacan ka geysan doontaa yareynta culeyska caafimaad ee bukaannada qaba cudurrada waaweyn iyo qoysaskooda.
Cao Haoqiang, Madaxweynaha Isbitaalka Jiaxing Kaiyi, ayaa sheegay in “Isbitaalka Jiaxing Kaiyi uu soo jiitay dareenka dadweynaha tan iyo markii la furay jilicsan May 20, 2021. Intii lagu jiray furitaanka jilicsan, nidaamyada isbitaalku, tas -hiilaadkiisa, adeegyadiisa iyo geeddi -socodkiisa si nidaamsan ayaa loo tijaabiyey oo shaqaalaha caafimaadka ee waax kasta waxaa loo tababaray inay siiyaan adeegga ugu fiican bukaannadeenna. ”
Annaga oo adeegsanayna jawaab -celinta laga helay furitaanka jilicsan, waxaan dhidibnay “Xarunta Dhakhaatiirta Caanka ah”, annagoo ku talo -galnay inaan keeno dhakhaatiirta ugu fiican Shiinaha si ay u siiyaan daryeel tayo sare leh dadka Jiaxing.
Iyada oo ay weheliso bilowga rasmiga ah, Isbitaalka Jiaxing Kaiyi ayaa sidoo kale si rasmi ah u daahfuray dejinta “Xarunta Jiaxing Kaiyi ee Dhaqaatiirta Caanka ah ee Shanghai”, iyada oo lala kaashanayo dhowr isbitaal oo heer sare ah iyo isbitaallada lafaha ee Shanghai. Isbitaalka Jiaxing Kaiyi wuxuu ujeedkiisu yahay inuu bixiyo la -talin khabiir oo dhakhaatiirta Shanghai ee “albaabka” Jiaxing.
Si loogu celiyo bulshada, laga bilaabo Oktoobar 21-23, Isbitaalka Jiaxing Kaiyi wuxuu qabtay rugta samafalka “Maalinta Daryeelka Dumarka-Sirdoonka AI Naas-baarista Naasaha ee Kansarka”, isagoo si firfircoon u qaadaya mas'uuliyadda bulshada ee caafimaadka haweenka. AIBUS, oo ah garaadka naas -nuujinta garaadka garaadka garaadka leh, oo ay weheliyaan kooxda dhakhtarkeennu waxay samayn doonaan baadhitaannada waxayna ka fulin doonaan hawlaha waxbarashada caafimaadka jaaliyadaha soo socda - Jiaxing Yu Xin Community, Cao Zhuang Community, Haiyan Bolite Paper iyo Huixin Import & Export Group. Isbitaalka Jiaxing Kaiyi ayaa sidoo kale sameyn doona baaritaanka naasaha ee kansarka sidoo kale.